Onye na-enye C-123
Onye na-enye C-123 2 afọ 6 ọnwa gara aga #1018
Ebudatara m C-123 ọnwa ole na ole gara aga. Enwere m nsogbu na props. Kama ịhụ ụzọ site na diski ị ga-ahụkarị n'ụgbọ elu, m nwere diski siri ike na ụgbọ elu na-efu efu n'igwe ojii. Ngwọta ọ bụla? Daalụ
Oge ike page: 0.279 sekọnd